Fetiraiza nokuti miriwo mubindu midziyo - China Qingdao King Good New Materials
Fetiraiza bindu miriwo midziyo
Herbs akura mumidziyo zvinoda zvakawanda fetiraiza pane avo akura mubindu. Nokuti havana nzira muzadze zvinovaka muviri vanoshandisa vakakwira sezvavanokura. Asi musafunganya, haufaniri kutenga chero chinoshamisira fetiraiza zvakananga mumidziyo yenyu, unogona kushandisa chete fetiraiza kuti miriwo mapindu mumidziyo yenyu zvakare! My pamusoro kurumbidza kuti kunonoka kusunungurwa Organic fetiraiza kuti miti yakura mumidziyo vari Healthy Zvikure makemikari miriwo fetiraiza uye Sustane zvose zvakasikwa chirimwa zvokudya.
Related Post: A mudziyo mubindu munyengeri papepa
For mumidziyo, kuti ipfungwa yakanaka kuti kuwedzera anonoke kusunungurwa makemikari fetiraiza granules kupinda mugaba, uyewo kushandisa mvura soluble fetiraiza yose Mwaka wokukura. Unogona kuwedzera zvishoma kusunungurwa makemikari miriwo mubindu fetiraiza muvhu asati kudyara enyu miriwo, kana unogona kusasa granules pamusoro ivhu uye muvare nayo kupinda tsvina pashure kudyara
N Kuwedzera yokurembedza kusunungurwa granules, unogona kushandisa mvura soluble fetiraiza mumidziyo yenyu yose Mwaka wokukura kuchengeta ako miriwo achiva nesimba. Water soluble fetiraiza vari zvikuru kupa kwako miriwo kukurumidza kuwedzera muviri, asi vari vakashandisa (kana kusuka kubva muhari) nokukurumidza saka vanofanira kuiswa kakawanda.
Related Post: 5 mazano nokuti achikura pepper
Dzandinofarira mvura mhando soluble fetiraiza kuti miriwo mapindu vari hove emulsion uye mufudze tii. Zvimwe Organic fetiraiza izvi zvinoshanda zvikuru kuchengeta mudziyo miriwo mapindu achiva nesimba chirimo zvose. Asi iwe haufaniri hako Fuss zvakawanda pamusoro zvokudya zvenyu mudziyo akura nemiriwo nguva dzose purogiramu, saka usanetseka kana kukanganwa danho iri.
Herbs akura mumidziyo vachada zvikuru kutarisirwa uye fetiraiza kupfuura miriwo akura mubindu. Asi kushandisa fetiraiza kuti miriwo mapindu uye midziyo zviri nyore, kunyanya kana utange mupfumi, makemikari ivhu uye kushandisa zviwanikwa fetiraiza.
Post nguva: Mar-05-2018